समाचार Archives - Page5of 308 - कृषि पत्रिका
कृषिमा प्रोत्साहित गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन रकम
आइतबार २१ भदौ, २०७७
तनहुँ। तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाले कृषकलाई कृषिमा प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेवापत गाउँपालिकाले वडा नं ८ का कृषकलाई प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलका अनुसार उक्त वडाका दुई जना बाख्रापालकलाई जनही १३ हजार रुपैयाँ, बङ्गुरपालकलाई जनही ११ हजार, एक जना माछापालकलाई पाँच हजार र […]
कोभिड–१९ प्रभाव : कुखुराको मासुको मूल्य घट्यो
शनिबार २० भदौ, २०७७
रत्ननगर। तीन हप्तादेखि जारी निषेधाज्ञाले फार्ममा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बजारसम्म नपुग्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको छ । पोल्ट्रीको राजधानीका रुपमा परिचित चितवनबाट बाहिरी जिल्लासम्म कुखुरा निर्यात गर्न नसक्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको हो । एक हप्ताअघि प्रतिकेजी खुद्रा रु. ४२० रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले रु. २०० पुगेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र […]
कोरोनाका कारण दुग्ध क्षेत्रमा २० अर्ब नोक्सान
ललितपुर। कोभिड–१९ को महामारीका कारण डेरी तथा उद्योग क्षेत्रका ६० प्रतिशत बजार गुमेको सरोकारबालाहरु बताएका छन् । कोरोना शुरु भएदेखि हालसम्म दुग्धको नीजि क्षेत्रमा मात्र २० अर्ब रुपियाँ घाटा लागेको बताइएको छ । एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले शनिवार आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ कारण दुग्ध क्षेत्रमा परेको समस्या र समाधानका उपायहरु’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया […]
५० प्रतिशत अनुदानमा हिउँदे तरकारीको बिउ
कास्की। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कृषिका माध्यमबाट स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ दुई हजार ५ सय घरधुरीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा हिउँदे तरकारीको बिउ वितरण गरेको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई त्याग्दै कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत स्थानीयवासीलाई उत्पादनसँग जोड्न विभिन्न नौ जातका हिउँदे तरकारीको बिउ वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले कृषकलाई मार्फा […]
दमौली। तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ स्थित तनहुँसुरका सीता थापा मल आउने थाहा पाएपछि शुक्रबार बिहानै सार्वजनिक सवारी नचलेकाले हिँडेर दमौली आउनुभयो । बिहान आठ बजेदेखि नै मल लिन लाइनमा बस्नुभएका उहाँले दिउँसो ४ः३० बजे हुँदासम्म पनि मल पाउनुभएन । “मल पाइने आशमा दिनभर लाइनमा बस्यौ, तर पाइएन,” उहाँले भन्नुभयो, “मल सकिएको पनि होइन, मल छ तर […]
जडीबुटीबाट बनाइएको अर्कबटी कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भएको दाबी
लुम्बिनी। बुटवल बेलबासका रोशन घिमिरेले खानाको स्वाद थाहा पाउन छाडेको तीन दिन भइसकेको थियो । उहाँले खाना त खानुहुन्थ्यो तर के खाएँ भन्ने पत्तै पाउनुभएको थिएन । एक दिन उहाँले आफूले खानाको स्वादै नपाएको भनी घरपरिवारलाई सुनाउनुभयो । उहाँको कुरा सुनेर सबै अचम्मित भए तर बुबा डिआर भने चिन्तित हुनुभयो । रुपन्देहीका अग्रज पत्रकार डिआर […]
संसारको सबैभन्दा ठूला तरकारी फल्ने ठाऊँ
देव भट्टराई बुधबार १७ भदौ, २०७७
अलास्का। खेतिपातीलाई कुनैपनि ठाऊँको हावापानी र मौसमले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। एक ठाऊँमा प्राकृतिक रुपमा उत्पादन गर्न सकिने तरकारीर फलफूल लाई कुनै अर्को ठाउँमा उत्पादन गर्न विभिन्न आधुनिक र कृत्रिम कृषि प्रविधिहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै कुनै एक सिजनमा फल्ने तरकारीलाई बेमौसमी खेती प्रविधीमार्फत अर्कै सिजनमा फलाउन पनि सकिन्छ। तर भनिन्छ नि, मान्छेले […]
सोमबार १५ भदौ, २०७७
ललितपुर। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ‘कुखुरापालन व्यवसाय’ थलिएको छ । चल्ला र कुखुराको बिक्री भारी मात्रामा घटेको छ भने दाना उद्योगहरु पनि बन्द भएका छन् । विगत ६ वर्षदेखि कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आएका धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगरका विनोद यादवले भन्नुभयो, “बन्दाबन्दीअघि कुखुराको बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो, […]
पहिरोले अवरुद्ध सडक समयमै सुचारु नहुँदा फलेवासका किसानले सडकमै दूध पोखे
मकैले बजार नपाउँदा दाङका किसान चिन्तित
व्यवसायीक बाख्रा पालन गर्ने हो ? प्रस्तावना पेश गर्नुहोस